Maxkamadda CQS waxay xukun dil ah ku xukuntay askari
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gaba gabeysay dacwadii ka dhanka aheyd Cumar Muxudiin Maxamuud oo ahaa sareeye guuto dilkii AUN C / laahi Maxamed Xasan Abow oo 20-kii bishii Sebtember, 2020 lagu dilay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho.
Dilka ayaa ka dhacay Dhismaha Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo ku dhaw Taalada Daljirka Daahsoon, waxaana markhaatiyaal ka hor cadeeyeen maxkamada dilka Cumar iyo cadeymo ay soo bandhigeen xeer ilaalinta.
War qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baaritaanka kiiska dilka ee Saddex loo xiray Cumar Muxidiin uu billowday maalin kadib ficilkiisa 21-kii November, 2020.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa aqbashay codsi uga yimid xafiiska xeer ilaalinta oo ahaa in la helo markhaatiyaal, cadeymo & dacwad uu horay u soo oogay eedeysanuhu laakiin xilligaas eedeysanayaashu way ka laabteen.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa soo bandhigtay seddex markhaati oo cadeeyay in eedeysanaha uu dhaca u geysanayay marxuumka ka hor inta uusan dilin, warqada dilka iyo natiijada baaritaanka booliska degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir.
Ugu dambayntii xoogag hubaysan oo ka tirsan Maxkamad saddex Xarigle ah oo u dabaaldegaya Maxamuud Cumar ayaa lagu xukumay dil qisaas ah, Mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan Abow, wuxuuna furan yahay 30 fiidnimo rafcaankiisa haddii aanu diidin.
Xabsiyada dowlada ayaa waxaa kujira shaqsiyaad loo heysto dambiyo kala duwan sida dil, dhac & falal kale, kuwaa oo dhamaantood sugaya xukun, halka qaar kamid ah dadka la xukumay oo qaarkood racfaan ka qaateen ay sugayaan xukun dil ah.
Kooxaha Man United iyo PSG ayaa ku dagaalamaya xiddigo waaweyn
Qoyska Mesut Ozil waxay si aan toos ahayn u muujinayaan kooxda